चासो ‘एट्याकिङ थर्ड’ कै- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
चासो ‘एट्याकिङ थर्ड’ कै
यतिबेला नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम गोलको खडेरीबाट गुज्रिइरहेको छ । नेपालले पछिल्ला ५ खेलमा एउटै गोल निकाल्न सकेको छैन । अझ सन् २०१९ यताका ११ खेल आधार मान्ने हो भने नेपालले ९ खेलमा गोल गरेको छैन । यसको स्पष्ट संकेत हो, नेपालको आक्रमण धारिलो छैन, यो समस्याको समाधान निकाल्नै पर्छ । अनि यसका लागि नयाँ युवा खेलाडीमै भर पर्नुपर्छ ।
मंसिर ६, २०७७ हिमेश
काठमाडौँ — नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बंगलादेश भ्रमण कस्तो रह्यो त ? दुई मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलको यो शृंखला यस्तो थियो, जसमा बंगलादेशले मैदानी जित त निकाल्यो । तर, भावनात्मक रूपमा नेपाल पनि पराजित रहेन । दुवै देशको फुटबलका लागि फेरि खेल्न पाउनु नै ठूलो थियो । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण लामो समयदेखि न नेपालमा न त बंगलादेशमा खेल सम्भव थियो । खेल फर्काउन यो शृंखला राम्रो बहाना बन्यो ।
नेपाली टोलीका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनका लागि भने यो सर्वथा नयाँ अनुभव रह्यो । यसअघि दुई अवसरमा नेपाली राष्ट्रिय टिम सम्हालिसकेका महर्जन मान्छन्, यसपल्टको बंगलादेश भ्रमणमा खेल्न पाउनुको खुसी आफ्नो ठाउँमा त थियो । तर केही कमीकमजोरी पनि उत्तिकै रहे । टिमले अझ राम्रो खेल्न सक्नुपर्ने सम्भावना उत्तिकै थियो, यदि तयारी लामो समय पाएको भए । सबै खेलाडी उपलब्ध भएको भए पनि त्यो सम्भावना देखिएन ।
शृंखलाका क्रममा नेपाल पहिलो खेलमा २–० ले पराजित भयो भने दोस्रो खेल गोलरहित बराबरीमा टुंगिएको थियो । काठमाडौं फर्केयता उनले टिमको प्रदर्शनबारे विश्लेषण गरिरहेका छन् । मान्छन्, ढाकामा उनले केही सिनियर खेलाडीबाट जति आस गरेका थिए, त्यो पूरा भएन । टिमको प्रदर्शन एक प्रकारले तिनै सिनियर खेलाडीमा निर्भर थियो, तर उनीहरूको प्रदर्शन अपेक्षाअनुसार रहेन । विशेषतः नेपालको अग्रपंक्ति चुकेकै देखियो ।
बंगबन्धु रंगशालामा भएका दुई खेलपछि टिम व्यवस्थापनले अनुभव गरेको छ, भरत खवास र नवयुग श्रेष्ठ त्यस्ता खेलाडी रहेनन्, जो पहिले थिए । भन्नैपर्छ, तिनले गरेको मिहिनेत पुगेन । जर्जप्रिन्स कार्कीले खासै केही गर्न सकेनन्, उनले त पर्याप्त समय पनि पाएनन् । यसको अर्थ हो, नेपालले फेरि गोलमा लय समात्ने हो भने केही फरक गर्नैपर्छ, नयाँ खेलाडीमा भरपर्नै पर्छ । पछिल्लो समय नेपालका लागि राम्रा विकल्प बनेका थिए, अभिषेक रिजाल ।
तर, उनी ढाका जान पाएनन् । एकै साता भए पनि काठमाडौंमा गर्न पाएको अभ्यासमा सबैभन्दा प्रभावशाली प्रदर्शन उनकै थियो । उनले त्यस्तो लक्षण देखाएका छन्, जसमा राम्रो फुटबल खेलाडी बन्ने ‘जुनुन’ र ‘क्षमता’ दुवै छ । सम्भवतः प्रशिक्षक महर्जनका लागि विमल घर्तीमगर विकल्प हुन सक्थे र सक्छन्, यदि उनी फेरि फुटबलप्रति गम्भीर भएर मैदानमा फर्कने हो भने । कम्तीमा फेरि राष्ट्रिय टिमले अभ्यास सुरु गर्दा विमललाई यत्तिको मौका दिनैपर्छ ।
यो सबै चर्चा अहिले नै किनभन्दा यतिबेला नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली गोलको खडेरीबाट गुज्रिइरहेको छ । त्यसैले त ढाकामा भएका दुवै खेलमा गोल निस्केन । अझ नेपालले पछिल्ला ५ खेलमा एउटै गोल निकाल्न सकेको छैन । सन् २०१९ यताका ११ खेल आधार मान्ने हो भने तथ्यांक अझ कहालीलाग्दो छ, नेपालले त्यसमध्ये ९ खेलमा गोल गरेको छैन । यसको स्पष्ट संकेत हो, नेपालको आक्रमण धारिलो छैन, यो समस्याको समाधान निकाल्नैपर्छ ।
‘राष्ट्रिय टिमलाई साँच्चै बलियो बनाउने हो भने एउटै भूमिकामा खेल्न सक्ने चार खेलाडीको विकल्प उपलब्ध हुनुपर्छ ।’
प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन । फाइल तस्बिर
टिम प्रशिक्षणमा निरन्तरता
फेरि यसको चर्चा अहिले नै किनभन्दा राष्ट्रिय टोलीको तयारीले निरन्तरता पाउन लागेको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का महासचिव इन्द्रमान तुलाधरका अनुसार ढाकाबाट फर्केका खेलाडीलाई केही दिन आराम दिइनेछ । त्यसपछि फेरि एक चरण कोभिड–१९ को परीक्षण गरिनेछ अनि सुरु हुनेछ राष्ट्रिय टिमको तयारी । एन्फाले योहान कालिन तत्कालै नेपाल फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको हुनाले टिमको जिम्मा महर्जनलाई नै दिने निर्णय लगभग गरिसकेको छ ।
अपेक्षाअनुसार यो साँचो भयो भने प्रशिक्षक महर्जनका आफ्ना केही योजना छन् । ढाका जानु अगाडि उनलाई एक प्रकारले यही टिम हो, यसलाई नै व्यवस्थापन गर्नु भनेर जिम्मा दिइएको थियो । तर, अब उनी कम्तीमा सुरुआतमा धेरै खेलाडीलाई प्रशिक्षणका लागि बोलाउन चाहन्छन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय टिमलाई साँच्चै बलियो बनाउने हो भने एउटै भूमिकामा खेल्न सक्ने चार खेलाडीको विकल्प उपलब्ध हुनुपर्छ ।’ उनको स्पष्ट संकेत के हो, अब फेरि एकपल्ट राष्ट्रिय टिम ‘पुस्ता हस्तान्तरण’बाट गुज्रिँदैछ ।
नयाँ खेलाडीलाई विश्वास गरेर तिनलाई नै तिखार्नुपर्ने धारणा राख्छन् उनी । त्यसैले त उनले ढाकामा ६ खेलाडीलाई ‘डेब्यू’ अवसर दिए । उनी भन्छन्, ‘हामीले ढाकामा ६ नयाँ खेलाडीलाई अवसर दियौं, अझै केही युवा खेलाडी हामीसँग उपलब्ध छ । त्यसमाथि केही सिनियर खेलाडी हामीसँग नभएको होइन, त्यसमध्ये केही ढाका जान पाएनन् । त्यसमध्ये अबका खेलमा सबै उपलब्ध हुने हो भने राष्ट्रिय टिमको प्रदर्शन फेरि राम्रो हुने विश्वास छ, प्रशिक्षक महर्जनको ।
एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरका अनुसार अबको केही महिना दिनमा नेपालले केही चरणका मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्नेछ । यसका लागि कुराकानी चलिरहेको छ, विशेषतः पाकिस्तान काठमाडौं आउन इच्छुक छ । नेपालले आफ्नो घरेलु मैदानमा खेल्न बाँकी विश्वकपका छनोट खेल त छँदै छ । त्यसैका लागि त हो नेपालले अहिल्यैदेखि नै तयारी सुरु गर्न लागेको । त्यो अर्थमा अबका केही दिन कम्तीमा नेपाली राष्ट्रिय टिमका सदस्य व्यस्तजस्तै रहने छन् ।
चिन्ता गोल खडेरीकै
अहिले राष्ट्रिय टिम फेरि गोल खडेरीबाट गुज्रिइरहेको छ । नेपाली टिम यसको सिकार भएको अहिलेमात्र होइन, पहिलेदेखि नै हो । अझ भनौं, नेपालले आफ्नो अग्रपंक्ति तिखार्न लामो समयदेखि असफल रहँदै आएको छ । सन् १९८४/८५ तिर नेपालले लगातार ९ खेलमा गोल गर्न सकेको थिएन । सन् १९८७/८९ तिर त नेपालले अझ लगातार १३ खेलमा गोल गरेको थिएन । त्यस्तै २०१३/१५ तिर पनि नेपालले ११ खेलमा गोल गरेको थिएन ।
त्यो खास समयमा गोल निस्कन नसक्नुको कारण त सबैलाई थाहै छ । केही खेलाडीलाई जित्नुमा भन्दा हार्नुमा बढी रूचि थियो, नतिजा मैदानबाहिर नै तय भइरहेको थियो । कम्तीमा अहिले त त्यस्तो स्थिति छैन । ५–६ खेलमा नेपालले पटक्कै गोल गर्न नसकेको उदाहरण अझै एकाध नभएका होइनन् । यसबाट बच्ने के उपाय छ त ? यो प्रश्न प्रशिक्षक महर्जनलाई सोध्दा उनी यसको समाधान रहेको मान्छन् । फेरि यो लगातार प्रशिक्षक र अभ्यासबाहेक अरू हुँदै होइन ।
यसका लागि सबैभन्दा पहिले साँच्चै लामै समयको तयारी चाहियो । अनि टिमको अभ्यास अत्यधिक मात्रमा ‘एट्याकिङ थर्ड’ मा केन्द्रित हुनुपर्‍यो । प्रशिक्षक महर्जनले खेलाडीका रूपमा दक्षिण एसियाली खेलकुदमा एक स्वर्ण र एक रजत जितेका छन् । यसको तुलनामा उनको प्रशिक्षण खेलजीवन बढी सफल देखिन्छ । उनकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय टिमले बंगबन्धु गोल्डकप त जित्यो नै, यू–२३ टिमले साफ च्याम्पियनसिप पनि जित्यो । अझ नेपालले यू–१९ साफ च्याम्पियनसिप जित्दा पनि प्रशिक्षक उनी नै थिए ।
उनी नेपाली फुटबलका एक सर्वाधिक सफल प्रशिक्षक हुन् । तथ्यांकले यही भन्छ । उनी भन्छन्, ‘बंगबन्धु गोल्डकप र एक वर्ष अगाडिको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पनि हामीले लगातार गोल निकालेका थियौं । यो किन सम्भव भयो भन्दा हामीले यी दुवै प्रतियोगिताका लागि भनेर एट्याकिङ थर्डमा केन्द्रित रहेर पर्याप्त अभ्यास गरेका थियौं । यी दुवै प्रतियोगितामा नेपालले गोल मात्र गरेन, पहिले गोल खाएर पछाडि परेको स्थितिबाट खेलमा फर्कन सफल रह्यौं र खेल जित्यौं ।’
एट्याकिङ थर्ड अर्थात टिमको अग्रपंक्ति । विपक्षी टिमको आधा भागमा गएर खेल्ने खेलाडी । ‘फेरि गोलको क्रम निकाल्ने हो भने हामीले अग्रपंक्तिमा खेल्ने खेलाडीलाई ध्यानमा राखेर विशेष अभ्याससत्र राख्न सक्छौं । ती खेलाडीलाई गोल गर्नमै केन्द्रित राखेर अभ्यास र प्रशिक्षण गराउन सक्छौं ।’ त्यसको अर्थ के हो भने अब उनले राष्ट्रिय टिमको अभ्यास सुरु गर्दा त्यसैमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नेछन् । फेरि टिमलाई चाहिएको पनि यही त हो ।
प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ ०९:२६
कुल दरबन्दी ७९,५३२ रहेको प्रहरीमा अहिले ११,९०७ पद रिक्त छन् । तीमध्ये ५,५८७ पदमा मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुरू भएको छ । ६ हजारभन्दा बढी पद खाली राखेर कसरी समायोजन गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
मंसिर ६, २०७७ मातृका दाहाल
काठमाडौँ — सरकारले नेपाल प्रहरीमा बेलैमा दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नगर्दा समायोजनमा सकस देखिएको छ । जसका कारण प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा खाली दरबन्दी राखेरै पठाउने वा पदपूर्तिका लागि आवेदन खुलाउने भन्नेमा अन्योल थपिएको छ ।
समायोजनको मुखमा पदपूर्ति नगर्न यसअघि नै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए तर त्यसका बाबजुद ५ हजार ५ सयभन्दा बढी जनशक्तिको भर्ना प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अझै प्रहरीमा ६ हजारभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त छ । फिल्डमा खटिने जनशक्ति अभाव रहेको र तत्काल प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना हुने स्थिति नरहेकाले सकभर पदपूर्ति गरेर मात्रै समायोजन गर्ने नीतिअनुसार काम भइरहेको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो । कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कुल दरबन्दी ७९ हजार ५ सय ३२ कायम गर्दै गृह मन्त्रालयले पेस गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीमा २४ हजार ८ सय १२ र प्रदेश प्रहरीमा ५४ हजार ७ सय २० दरबन्दी तोकिएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश १ मा १० हजार ७ सय १, प्रदेश २ मा ९ हजार १ सय ५१, वाग्मती प्रदेशमा ७ हजार ४ सय, गण्डकीमा ६ हजार ७ सय ४५, लुम्बिनीमा ९ हजार ४ सय ४३, कर्णालीमा ४ हजार ४ सय ५८ र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीका लागि ५ हजार ९ सय १ दरबन्दी कायम गरिएको छ । तर कुल दरबन्दीमध्ये हाल ६७ हजार ६ सय २५ जनामात्रै कार्यरत छन् । रिक्त ११ हजार ९ सय ७ मध्ये पछिल्लो पटक लोक सेवा आयोगको सहमति लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले समायोजन सुरु हुनुअघि नै कात्तिक २१ गते ३ सय ६० प्रहरी कार्यालय सहयोगी र असोज ३० गते ५ हजार २ सय २७ जवान पदमा आवेदन खुलाइसकेको छ ।
यी दुवै आवेदनबाहेक रिक्त पद सकभर लोक सेवासँग सहमति लिएर भर्ना गर्ने वा यसलाई नेपाल प्रहरीको दरबन्दीमा मिलान गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको गृह स्रोतको भनाइ छ । समायोजनको मुखमा प्रहरी भर्ना खुलाएको भन्दै प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले गएको कात्तिक २० गते भर्ना रोक्न माग गर्दै संघ सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै प्रहरी प्रधान कार्यालयले थप ३ सय ६० कार्यालय सहयोगीको आवेदन खुलाएको थियो । विवादका बीच खुलाइएका पछिल्ला दुई आवेदनले पनि खाली दरबन्दी राखेर समायोजन नगर्ने भन्ने रणनीति पुष्टि हुन्छ ।
‘समायोजनमा सकभर रिक्त दरबन्दी नपठाउने भन्ने छ, यसलाई मध्यनजर गरेरै पछिल्लो पटक प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यालय सहयोगी र जवान पदमा ५ हजार ५ सयभन्दा बढीमा आवेदन खुलाइसकेको छ,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी रिक्त पदमा पनि साधनस्रोतले भ्याएसम्म लोक सेवाबाट सहमति लिएर आवेदन खुलाइने सकिन्छ ।’ यसअघि कात्तिक २२ गते कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले प्रदेश लोक सेवा आयोगको निष्पक्ष परीक्षा सञ्चालन प्रमाणित हुन बाँकी भएकाले समायोजन भएर जाने जनशक्ति संघीय लोक सेवा आयोगबाटै पदपूर्ति हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले सरकारबाट माग भई आएमा प्रहरीमा रिक्त पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोग तयार रहेको पनि बताएका थिए ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका पूर्वगृह सचिव गोविन्द कुसुमले समायोजनअघि नै प्रहरीको रिक्त पदपूर्ति गर्न सकिने बताए । ‘कोरोना महामारीबाहेक देशभर थप ५/७ हजार प्रहरीको एकैपटक पदपूर्ति गर्न आयोगलाई कुनै समस्या छैन,’ कुसुमले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर भएका जनशक्ति नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने र रिक्त संख्यामा भर्ना गर्ने जिम्मा ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार संघ र प्रदेश लोक सेवालाई दिँदा पनि उचित हुन्छ ।’ प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सशक्त र निष्पक्ष बनाउन प्रदेशबाट भर्ना हुने दरबन्दीमा संघले लोभ गर्न पनि नहुने उनको तर्क छ ।
प्रदेश प्रहरीमा समायोजनपछि रिक्त हुने दरबन्दीमा परिचर, जवान, असई र निरीक्षकसम्मको भर्ना प्रदेश लोक सेवाले गर्न सक्छ । यसरी भर्ना भएका प्रहरीले प्रदेशको एसएसपी तहसम्म मात्रै बढुवा हुन पाउँछन् ।
हतियार र सञ्चारमा प्रहरी नियन्त्रण समायोजनपछि प्रदेश प्रहरीलाई चाहिने हातहतियार/खरखजाना र सञ्चार उपकरणमाथि नेपाल प्रहरीकै कमान्ड/कन्ट्रोल र व्यवस्थापन हुने भएको छ । यसका लागि हरेक प्रदेश प्रहरीका युनिटमा नेपाल प्रहरीको संयन्त्र राखिनेछ । औचित्य, आवश्यकता र सुरक्षा विश्लेषण गरेर मात्रै प्रदेश प्रहरीका लागि हतियार तथा गोलीगठ्ठा र उपकरण उपलब्ध गराइने गरी हतियार व्यवस्थापनको नीति बन्ने क्रममा रहेको प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐनमा नै प्रदेश प्रहरीका लागि चाहिने हतियार र सञ्चार उपकरणमाथि नेपाल प्रहरीको नियन्त्रण र व्यवस्थापन हुने भन्ने छ ।
‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको व्यावसायिक कार्यसम्पादन र संगठनात्मक आवश्यकताका लागि हातहतियार खरखजाना र सञ्चार साधनको व्यवस्थापन मिलाउने’ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ को दफा ३ (ज) मा भनिएको छ । उक्त दफाको मर्म नै हतियार र सञ्चार उपकरण नेपाल प्रहरीले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भन्ने रहेको ती प्रहरी अधिकारीले बताए । प्रदेश प्रहरीका कामकारबाहीमाथि सुपरिवेक्षणदेखि विशेष किसिमका अपराध अनुसन्धान गर्न ७७ वटै जिल्लामा नेपाल प्रहरीका संरचना रहने पछिल्लो ओएन्डएममै उल्लेख छ । तत्काल यस्ता संरचना ७ प्रदेशका सातवटै नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय र २२ जिल्लामा यसका युनिट रहने भनिएको छ ।
सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन पारित गरेसँगै समायोजनको बाटो पनि खुलेको छ । समायोजनमा जानेका लागि मोडालिटी बनाएर आवेदन खुलाइने गृहका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार प्रदेशमा समायोजन गरिने जवानदेखि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सम्मलाई आह्वान गरिनेछ । यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुन प्रदेशमा समायोजन हुने भन्ने फारम सम्बन्धित प्रहरीलाई भराउने छ । यसका लागि प्रहरी कर्मचारीलाई नै निवेदन आह्वान गरिने छ । समायोजनका लागि निवेदन नदिने प्रहरी कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बाधा नपुग्ने प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ को दफा ५ मा उल्लेख छ । निवेदन दिएका प्रहरीलाई प्रत्येक प्रदेशमा समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले एकीकृत विवरण तयार पार्नेछ । त्यसपछि राजपत्रांकितको हकमा गृह मन्त्रालय र कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी नायब निरीक्षकसम्मलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले समायोजन पत्र दिने दफा ७ मा उल्लेख छ ।
समायोजन भएर जाने प्रत्येक कर्मचारीलाई २/२ ग्रेड थपेर पठाइनेछ । समायोजनमा मूलतः कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार बनाइने छ । पति/पत्नी दुवै प्रहरीमा भएको अवस्थामा दुवै जनालाई एउटै प्रदेशमा समायोजन गरिने ऐनमै उल्लेख छ ।
प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ ०९:२०